Dowladda Federaalka Oo Muqdisho Ka Hirgalisay Xarunta Ugu Weyn Ee Is-weydaarsiga Internet-ka | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Oo Muqdisho Ka Hirgalisay Xarunta Ugu Weyn Ee Is-weydaarsiga Internet-ka
MUQDISHO –Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada ayaa magaaladda Muqdisho ka billowday dhismaha Xarunta Is-weydaarsiga Internet-ka (Internet Exchange Point), taas oo fududeyn doonta in shirkadaha bixiya adeegyada internetka ay isku xirmaan, isla markaana isku weydaarsadaan xogtooda.
Wasiirka Isgaarsiinta & Teknoolojiyada, Eng. Cabdi Cashuur Xasan, oo furay shir aqoon-is-waydaarsi oo ka dhacay, ayna ka qaybgaleen shirkadaha Isgaarsiinta ee Muqdisho , ayaa in Xaruntan ay ka mid ah yahay qorshayaasha ay Wasaaraddu ku dhiseyso kaabayaasha isgaarsiinta dalka, isla markaana uu wax weyn ku soo kordhin doono isgaarsiinta iyo teknoolojiyada dalka. Wasiirka ayaa uga mahad celiyay Bankiga Adduunka iyo Hay’adda PCH gacanta ay Wasaaradda ku siinayaan dhismaha xaruntan.
Dhinaca kale, Nishal Goburdhan oo ah khabiir ku takhasusay dhismaha IXPs oo ka socday Hay’adda Packet Clearing House (PCH) oo dalal badan ka caawisa dhismaha xarumahan oo kale, ayaa sheegay in xaruntan ay sare u qaadi doonto adeegyada kala duwan ee u baahan internet, faa’iidooyinkeedana ay wada dareemi doonaan shirkadaha iyo dadweynahaba.
Wakiillo ka kala socda shirkadaha isgaarsiinta, internetka, dalladaha jaamacadaha, xirfadleyda teknoolojiyada ee Magaaladda Muqdisho ayaa sheegay in ay baahi weyn u qabaan inay ku soo biiraan MogIX. Muddada uu socdo aqoon-is-weydaarsigan waxay wakiilladu ka doodi doonaan qaabka ugu wanaagsan ee xaruntan loo maamuli karo, iyagoo ugu dambeynta sameyn doona guddi ku-meel-gaar ah oo maamula xaruntan.